Hiran State - News: Ururka Shabaab oo bur bur qarka u saaran kedib markii la xakameeyey dhaqaalahii uga imaan jiray wadamada.
Ururka Shabaab oo bur bur qarka u saaran kedib markii la xakameeyey dhaqaalahii uga imaan jiray wadamada.
Somalia:(hiranstate.com)-Ururka Shabaab oo ah urur hubeysan dagaal ba'ana ka wada dalka Somaliya ayaa inta badan ku tiirsanaa dhaqaalo ay horey uga heli jireen wadamo Carbeed oo hada ay ka tagan yahiin qalalaaso iyo mid siyaabo kala duwan looga soo aruuriyo shacabka Somaliyeed ee qurbaha siiba dumarka.
Qaar ka mid ah wadamada Yurub iyo America ayaa iyagu dhawrkii bilood ee ina dhaaftay dabagal ku hayey inta badan wadamada ay Somalidu ku badan tahay bal si ay u ogaadaan xiriirka ka dhaxeeya kooxda Shabaab iyo Somalida qurbaha.
Waaxda sir doonka Mareykanka
Waaxda sirdoonka Mareykanka oo iyagu waxii ka danbeyey qaraxii ka dhacay 9/11 America 2001 kii dabagal ku hayey qofkasta oo muslin ah ayaa xooga saaray jaaliyado badan oo ay wadamadoodu qasan yahiin sida Somaliya. waxey bilaabeen iney baaritaan ku sameeyaan inta badan Somalida Africa u safarta oo marka ay Mareykanka ka dhoofayaan badanaa transit ku sii mara magaalada New York oo ah qadka kaliya ee aad raqiiska uga ah dhinaca socdaalka.
Waaxda sirdoonka waxey xakameeyeen amaba ay dusha sare kala socdaan meelaha ay Somalidu lacagaha ka diraan sida xawaaladaha iyo Bankiyada.Sidoo kale waxaa baaritaan lagu sameeyaa Somalida sanadkasta ka dhoofa America siiba dhalinyarada iyo haweenka iyagu u safra dalka Somaliya. Waxaa xooga la saaray in waaxda sirdoonku ay masaajidyadii laga abaabuli jiray caruurta ku biireyso ururka Shabaab in iyaduna la xakameeyey.
Dalka Britian iyo dowlada cusub ee hada xukunka heysa
Marka laga soo tago wadanka Mareykanka waxaa jiro wadamo badan oo ka tirsan qaarada Yurub oo ay ku nool yahiin dhalinyaro sanadkasta dib ugu laabto gudaha wadanka waxaana ka mid ah dalka UK oo ay Somalida ugu badan qaarada Yurub ku nooshahay. dowlada cusub ee dalka Britian waxey xooga saartay iney daba gal ku sameyso Somalidii wadankeeda ka dhoofay 3dii sano ee ugu danbeysay kuwaasi oo baaritaan xoogan lagu hayo, inkastoo la sheegayo in qaarkood magacyadooda la dhigay Airoporada waaweyn ee dalkaasi UK , taasi oo sida la sheegay qeyb ka ah la dagaalanka argagaxisada waxa ay ula baxeen reer galbeedka.
Ururka Shabaab dhaqaalaha looga aruuriyo dalka Britian waxaa inta badan siyaabo kala duwan looga qaadaa dumarka,shaqsiyaadka howlahaasi faraha kula jirane waa kuwo sanadkasta dib ugu laabta gudaha wadanka, dowlada cusub ee hada talada heysa ayaa bilaawday iney Somalida ay ka shakiyaan uga yeeraan xarumaha booliska si su'aalo dhawr ah looga weydiiyo safaradooda, halka qaarkood lagu sugayo garoomada laga dhoofo kuwaasi oo dhaqaalo badan uga diray dalkaasi midowkii maxkamadaha oo hada Shabaab isku bedlay.
Shabaab iyo Xaalkooda
Ururka Shabaab xaaladiisa guud waxey ku dhaw tahay bur bur mar hadii dhinackasta laga xakameeyey, sidoo kale waxaa hada gudaha wadanka ka bilaabatay in dhalinyaradii u dagaali jirtay Shabaab ay koox koox uga baxaan kedib markii ay dhibsadeen dhaqanada iyo siyaasadaha uu ururkaasi ka wado dalka Somaliya.
· admin on April 21 2011 13:13:50 · 0 Comments · 1810 Reads ·
14,568,788 unique visits